Momba anay - CSPower
Nanomboka tamin'ny 2003, CSPOWER BATTERY TECH CO., LTD dia nanomboka nanamboatra, nanamboatra ary nanondrana batteries azo antoka sy maharitra tsy tapaka izay ampiasaina amin'ny rafitra angovo azo havaozina, rafitra backup ary sehatry ny herinaratra.Satria ny bateria no tena fototra fototra amin'ny vahaolana fitahirizana angovo ary heverina ho fiarovana farany, noho izanyizahay CSPower Battery dia ny hanome toky fa ny batteries dia tsy maintsy matanjaka sy azo ianteherana..
Amin'izao fotoana izao, ao amin'ny valan-javaboary indostrialy maoderina, kilasy manerantany50.000 metatra toradroaany Guangdong, Shina, CSPOWER dia niitatra hatrany ho eo ho eompiasa 1000izay ahitana ekipan'ny fitantanana za-draharaha tohanan'ny ekipan'ny mpiasa ara-teknika sy mpanamboatra.
Mamokatra fahafaha-manao isan-taona eo ho eo ny trano fonenan'ny CSPOWER2,000,000kVAh ary lasa orinasa lehibe indrindra ao amin'ny faritanin'i Guangdong.
Nahoana no misafidy CSPower?
Iray amin'ireo mpamokatra folo voalohany
Iray amin'ireo mpanamboatra TOP10 ao amin'ny indostrian'ny bateria lead-asid sinoa, manana atrikasa loviantsika manokana.
18 taona traikefa fanondranana
Mihoatra ny 18 taona traikefa amin'ny famolavolana, fanamboarana ary fanondranana bateria AGM/GEL.
Mifanaraka amin'ny fanamarinana ISO, UL, CE
ISO 9001 sy 14001 orinasa voamarina, Ny bateria rehetra dia mitaraina amin'ny fenitra ISO, UL, CE nankatoavina.
Fenoy ny tsipika famokarana manokana avy amin'ny fitaovana firaka mankany amin'ny batteries vita, mifehy ny kalitao hatramin'ny niandohany, ny bateria dia avy amin'ny 0.8Ah ka hatramin'ny 3000Ah, 2V / 4V / 6V / 8V / 12V andiany rehetra ho safidy.
Araho hentitra ny kalitao
100% entana fitiliana mba hiantohana fanamiana fahaiza-manao, hentitra fanaraha-maso kalitao avy amin'ny IQC, PQC ho QA mba hahazoana antoka ny kilema tahan'ny latsaky ny 0.1%.
Manome serivisy OEM & ODM ho an'ny mpanjifa.Azontsika atao ny OEM LOGO sy ny famolavolana fonosana araka ny fanomezan-dàlana avy amin'ny mpanjifa ary mitazona ny endrikao manokana.
Batterie cellule solaire Batterie tsara indrindra ho an'ny rafimasoandro Batterie tsy misy fikojakojana Paneau solaire misy bateria ho an'ny trano Battery Ups ho an'ny solosaina Batterie 12v 7ah azo averina